စုချစ်သူ: Salary Increment
လစာမတိုးတာကြာလို့ မန်နေဂျာကို ဘယ်လို အသိပေးရရင် ကောင်းမလဲ။ ဒါမှမဟုတ် (Salary increment letter) ဘယ်လိုရေးရမလဲလို့ အကူအညီတောင်းလာတဲ့ မောင်ညီမလေးများ အတွက် ...
စင်ကာပူမှာ များသောအားဖြင့် Organization အသေးလေးတွေရဲ့ လုပ်ပုံ လုပ်နည်းနဲ့ Organization အကြီးတွေရဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်း မတူညီတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်သိသလောက်လေး ၂မျိုးခွဲပြီး ပြောသွားပါမယ်နော်။
For those who working with Systematic Organization
အလုပ်သမား အခွင့်အရေးကို စနစ်တကျ နည်းလမ်းမှန်မှန် အတတ်နိုင်ဆုံးကျင့်သုံးပေးတဲ့ Organization တွေမှာတော့ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း Appraisals, Annual Performance Review တွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Appraisals နဲ့ Annual Performance Review တွေ နှစ်စဉ်လုပ်ပေမယ့် နှစ်တိုင်း လစာတိုးပေးမယ်၊ ဘောနပ်စ်ပေးမယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ အခုရေးထားတဲ့ အချက်တွေကို အခြေခံပြီးမှသာပဲ လစာတိုးနဲ့ ဘောနပ်စ်ကိစ္စကို စဉ်းစားပေးနိုင်ကြပါတယ်။
၁) ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး လက်ရှိနဲ့ ရှေ့အလားအလာ အခြေအနေ
၂) company ရဲ့ လက်ရှိနဲ့ ရှေ့အလားအလာ performance and Business Opportunity
၃) Relative Outside Market Rate
၄) ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ Team ရဲ့ Importance နဲ့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Performance
စတာတွေရယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး bonus နဲ့ increment ကိုပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လောက်တော်တော်၊ ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ ကြိုးစားခဲ့ပစေ၊ ကိုယ့် company က စီးပွားပျက်ကပ်ထဲမှာ အလူးအလဲ ခံနေရရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အရှုံးပေါ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဘောနပ်စ်ပေးနိုင်မှာလဲ။ ဘယ်လာ လစာတိုးပေးနိုင်မလဲ။ အလုပ်မပြုတ်ရင် ကံကောင်းပဲ မဟုတ်လား။
company ကပုံမှန် လည်ပတ်နေတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ လစာတိုးကို ကိုယ့် performance ပေါ်မူတည်ပြီး တိုးပေးနိုင်တာပေါ့လေ။ ဘောနပ်စ်လဲ များများ မျှော်လင့်နိုင်တာပေါ့။ အဲဒီတော့ နှစ်စဉ် ကိုယ့်ဘာသာ self Appraisal လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းက ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ contributions နဲ့ ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ achievements တွေအားလုံးကို management က recognize လုပ်ချင်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သေသေချာချာ ရေးရပါမယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ self Appraisal အရင်လုပ်ပြီး ကိုယ်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ကိုယ့်မန်နေဂျာက ကိုယ့်ကို Appraisals လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ညှိရပါမယ်။ ဆွေးနွေးရပါမယ်။ တကယ်လို့ ဒီနှစ်မှာ မတော်တဆ ကိုယ်က နည်းရခဲ့လျှင်လည်း နောက်နှစ်အတွက် agreement ရအောင် ယူတတ်ရပါမယ်။
For those who working with non-Systematic Organization
နှစ်စဉ် Performance Review တွေ လုပ်လေ့မရှိတဲ့ Company မျိုးမှာ လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တမျိုးစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့နော်။ တချို့တွေများဆို ၃-၄နှစ်လောက် လုပ်နေတာ လစာ လုံးဝတိုးမရတာတွေ ရှိသတဲ့။ ကိုယ့် Company က အခြေအနေကောင်းရဲ့သားနဲ့ လစာတိုးရမယ့်ကိစ္စကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ပေးဆပ်မှုနဲ့ ထိုက်တန်စွာ လစာမရဘူးလို့ ခံစားရရင် ၊ Outside Market Rate နဲ့ ယှဉ်ကြည့်လို့ ကိုယ့်လစာက နည်းနေတယ်လို့ ယူဆရင် လစာတိုးတောင်းသင့်ပါတယ်။
လစာတိုးတောင်းရမဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ တသမတ်ထဲမရှိပါဘူး။ ကိုယ် အဆင်ပြေသလိုနည်းနဲ့ အမျိုးမျိုး ပြောကြတာတွေ့ရတာပဲ။ တချို့ကလည်း ဘော့စ်ကို ပါးစပ်နဲ့ ဖွင့်ပြော ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။ တချို့ကလည်း ဘော့စ်နဲ့ မရင်းနှီးတော့ ဘော့စ်နားဆီကို ပေါက်မဲ့သူကို သွားပြောတတ်ကြတယ်။ တချို့ကလည်း စာရေးပြီး ပြောကြတယ်။ စိတ်တိုတတ်တဲ့ တချို့ကတော့ အလုပ်ထွက်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ လစာနည်းလို့ စသဖြင့် ဓါတ်ကြမ်းတိုက်ချင်လည်း တိုက်ကြတယ်။ တချို့လည်း အလုပ်ထွက်မယ်လို့ ကြိမ်းလိုက်မှ လစာတိုးရတာမျိုးလဲ ရှိသတဲ့။ ဒါကတော့ ကိုယ်က ကိုယ့်အလုပ်မှာ ကိုယ်က မရှိမဖြစ် တကယ်ကို အရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်မှ ရမယ်နော်။
အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ့်မန်နေဂျာကို face to face တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ပါးစပ်နဲ့ပြောတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ လစာမတိုးတာကြာပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ မတိုးတာလဲ၊ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ထားတယ်၊ ဘယ်လို တာဝန်တွေယူနေရတယ် စသဖြင့် သူနားလည်အောင် ပြောပြရမှာပဲ။ အကောင်းဆုံး လစာတိုးတောင်းတဲ့ နည်းကတော့ လစာတိုးတောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားထားရင် အရင်ဆုံး အလုပ်ပိုလုပ်ပြရမှာပါပဲ။ ကိုယ့်မန်နေဂျာသိအောင် သာမန်ထက် အရေးပါတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ယူပြရမှာပဲ။ ကိုယ့်က ကိုယ့် team member တွေကိုဘယ်လို motivate လုပ်သလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ value က သူများနဲ့မတူ ဘယ်လို Individual ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူသိအောင် လုပ်ပြရမယ်။ အရေးကြီးဆုံး နောက်တချက်က လစာတိုးဖို့အကြောင်း သူနဲ့ စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ စိတ်မတိုမိပါစေနဲ့။ အေးအေးဆေးဆေး professional ဆန်ဆန် ဆွေးနွေးပါ။
တချို့ကတော့ face to face စကားပြောရမှာ အားနာတာတို့ ကြောက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စာရေးတာကို ပိုရွေးချယ်ချင်ကြပါတယ်။ စာရေးတာကို ရွေးချယ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် စာရေးနည်းလေးကို နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ စာရေးတာကို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေ မရေးပါနဲ့။Keep it simple and polite ဖြစ်ပါစေ။ ကိုယ့် အခြေအနေကို ရေးပြပါ။ ကိုယ်ယူနေတဲ့ တာဝန်တွေကို ရေးပြပါ။ ဒီထက်မက တာဝန်ယူချင်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြပါ။ အခု ညီမလေးတစ်ယောက်ကို ရေးပေးတဲ့ စာနမူနာကို ဒီမှာ ရေးပြလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ အင်တာနက်ထဲကတွေ့တဲ့ sample တွေကနေ အတုခိုးရေးရတာပါပဲ။ ဒီထက်မက sample တွေလည်း internet မှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ှSubject: Request for Salary Increment
I have worked for this company for the last two years as an xxxx Engineer. During this time I have done my duties to the best of my abilities. I have been sincerely dedicated and have constantly worked hard.
As xxxxxx engineer, I have successfully implemented xxxxxx and currently I am taking new responsibilities for xxxxxxxxx. I am eager to assume these new responsibilities and will work hard to meet tight deadlines.
I am prepared to take more responsibility, and I will continue to be the valued, hard working, committed, reliable and honest employee that I have always been.
However, despite general appreciation of my work, I have not received any salary increment. My basic salary is still only .... S$. Hence, I would like to request you to consider my case for an increase to xx% of current pay.
The cost of living in Singapore has become very high, with price increases for house rental, PUB, food and transport, and this really has putastrain on my earnings.
I hope this application merits your favorable consideration and you will provide your recommendation to HR department for their further action.
အရေးကြီးဆုံးနောက်တချက်ကတော့ ကိုယ်တောင်းဆိုလိုက်လို့ လစာတိုးရလာပြီဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို မပြောမိ၊ မကြွားမိပါစေနဲ့။ Keep it confidential!!! လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း မလိုလားအပ်တဲ့ ရုံးတွင်း ညိုညင်မှုတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
တခါက မေးလ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ လစာတိုးတောင်းတဲ့ ဟာသလေး ပြောပြပါအုံးမယ်။ ကဲ... အပျင်းပြေလေး ဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး။
In thi$ life, we all need $ome thing mo$t de$perately. I think you $hould be under$tanding of the need$ of u$ worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company .
I am $ure you will gue$$what I mean and re$pond $oon.
NOw the newspaper are saying the world`s leading ecoNOmists areNOt sure if the United States may go into aNOther recession. After the NOvember presidential elections things may turn bad.
အဲသလို ပြန်စာမျိုးတော့ မရကြပါစေနဲ့နော်....
1) salary negotiation tips
2) Various Internet Web Sites with Salary Increment
Posted by စုချစ် at 8/19/2010 12:40:00 PM
ကောင်းပါ့ ကျွန်တော်လည်း လစာတိုးမလားလို. ထွက်စာတင်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် လစာမတိုးပဲ အလုပ်ကထုတ်လိုက်ရင်လည်း နားရတာပေါ့
မစုချစ် လစာ များများ တိုးပါစေ ...း)
မနာပ ဘာဝ ဒဿန
ထူးအိမ်သင် ၆နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ...
Composition ofaprimary5student